USA: Khasaaraha Duufaantii Harvey oo sii kordheysa – SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / USA: Khasaaraha Duufaantii Harvey oo sii kordheysa – SAWIRO
USA: Khasaaraha Duufaantii Harvey oo sii kordheysa – SAWIRO
August 29, 2017 - By: Khalid Yusuf
Duufaanta Harvey oo Jimcihii ku dhufatay xeebaha koonfur-bari ee gobalka Texas ayaa geysatay khasaaro baaxadleh iyadoo la filayo in biyaha roobka ee duufaantaasi ay maalmaha soo socda sii kordhaan.
Waxaa lagu tilmaamay duufaantan midii ugu xoog badneyd ee ku dhufata dalkaasi Maraykanka sanadihii lasoo dhaafay, inkastoo xawaaraha dabeysha duufaantaasi ay hoos u dhacday ayaa hadana cabsida ugu weyn ay tahay biyaha roobka duufaantaasi oo keenay khasaaro badan.
Roobka ku da’ay deegaanada ay duufaantaasi gaartay gaar ahaan nawaaxiga magaalada Houston ee gobalkaasi Texas ayey ka jirtaa fatahaad baaxadleh oo barokicisay kumanaan qoys.
Dadka guryahooda ay biyaha ugu galeen ayaa ka qaxay dhulka ay fatahaada ka dhacday, iyadoo ciidamada ay weli wadaan gurmadka ay u fidinayaan dadka ku xaniban deegaankaas.
In ka badan 30kun oo qof ayaa la sheegay inay guryahooda ka barokaceen. Waxaa sidoo kale la filayaa in dad ka badan 400kun qof ay u baahnaan doonaan gargaarka dowlada Federaalka Maraykanka.
Sadaasha ayaa ah in Roobka la filayo maalmaha soo socda uu dhigi doono biyo ka badan, isugeyn roobabkii gobalkaasi ka da’ay sanadkii lasoo dhaafay.
Madaxweynaha Maraykanka Donlad Trump ayaa la filayaa inuu maanta booqdo qeybo kamid ah dhulka musiibada ay ka dhacday, waana musiibadii ugu horeysay oo wadankaasi ku habsata tan iyo intuu xilka qabtay.
Shacabka Maraykanka ayaa loogu baaqay inay ka qeyb qaataan Qaaraanka loogu gurmanayo dadka barokacayaasha ah.
Mexico oo diyaar la’ah Gargaar!
Wadanka Mexico oo ay jaarka yihiin dalka Maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gargaar usoo diro Maraykanka.
Mexico oo xaduud la wadaagta gobalka musiibada ka dhacday ee Texas ayuu horey u sheegay Madaxweynaha Maraykanka inuu ku xiri doono Darbi weyn oo kala jara labadaasi dal, Trump oo shalay saxaafada weydiisay qorshihii Darbiga xaduuda Mexico ayaa markale ku celiyey inuu dhisi doono darbigaasi si ay isaga xijaabaan amni xumada ka jirta dalkaasi Mexico, waa siduu hadalka u dhigayee.